बजारको समष्टि आर्थिक चर, तिनीहरू के हुन्? | अर्थव्यवस्था वित्त
वृहत् आर्थिक चर
क्लौडी क्यासलहरू | | संकट, सामान्य अर्थव्यवस्था
यो फरक संग परिचित हुन आवश्यक छ समष्टि आर्थिक चर, उनीहरू केका हुन् भनेर जान्न र उनीहरूले कसरी नागरिकको रूपमा हामीलाई प्रभाव पार्दछन्।
यस कारणका लागि, तल हामी तपाईलाई समष्टि आर्थिक चरसँग सम्बन्धित सबै कुरा बताउन जाँदैछौं र किफायती।
1 बृहत आर्थिक चर, ती के का लागी हुन्?
2 कुन आर्थिक आर्थिक अध्ययनहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
3 राजनीतिक वातावरण र समष्टि आर्थिक रूपहरू
4 के रणनीतिहरु प्रयोग गरिन्छ
5 के हुन्छ जब तपाईं विदेशमा लगानी गर्नुहुन्छ
6 सब भन्दा सान्दर्भिक समष्टि आर्थिक चरहरू के हुन्
6.1 कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन
6.2 जोखिम प्रीमियम
6.2.1 यो प्रीमियम कसरी गणना गरिन्छ?
6.3 मुद्रा स्फीति
6.3.1 मुद्रास्फीति भित्र के घटित हुन्छन्
6.4 समष्टि आर्थिक भिन्नतामा ब्याज दरहरू
6.5 विनिमय दर
6.6 भुक्तानीहरूको शेष रकम
7 देशको समष्टि आर्थिक रूपको रूपमा बेरोजगारी
8 समष्टि आर्थिक भिन्नताहरूमा आपूर्ति र माग सूचकहरू
9 समग्र माग र आपूर्ति
10 लघु आर्थिक चर: तिनीहरू के हुन्?
बृहत आर्थिक चर, ती के का लागी हुन्?
La समष्टि आर्थिक चरको उद्देश्य, एक देश मा कस्तो आर्थिक गतिविधि को प्रकार को खोज मा ध्यान केन्द्रित र एक आधार को रूप मा विश्वास गर्दछ कि यो एकै ठाउँमा मा महीनहरु मा विकसित हुनेछ। यी तथ्या .्कहरू पूरा गर्न क्रममा, के गरियो केहि सूचकहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस् जसद्वारा हामी देशको आर्थिक स्थिति जान्ने छौं, उनीहरूको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको स्तर के हो र देश कतातिर अग्लो छ।
यो अध्ययन सञ्चालन पछि तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनिहरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता हुन् देश भित्र र यो पनि, कुन कम्पनीहरु देश भित्र सब भन्दा राम्रो स्थित छ भनेर जान्नको लागि।
कुन आर्थिक आर्थिक अध्ययनहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
समष्टि आर्थिक चरको अध्ययन देश भित्र एक वा बढी कम्पनिहरु खरिद गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। म्याक्रोइक्रोनेमिक्स महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो एक हो कि मापदण्ड र राजनैतिक सिफारिशहरू मार्फत, दुवै वित्तीय र मौद्रिक।
को माध्यम बाट म्याक्रो इकोनॉमिक भ्यारीएबलहरू तपाई चीजहरूको लागतको स्थिरीकरण जान्न सक्नुहुनेछ स्वतन्त्र बजार मा एक देश भित्र। यो बुझिन्छ कि देश स्थिर छ जब कुनै पनि समयमा मूल्यहरू बढ्दैन वा झर्दैन।
म्याक्रोइकनोमिक्स को माध्यमबाट, एक देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लागि पूर्ण स्तरको काम गर्ने प्रयास गरिन्छ। म्याक्रोइकनोमिक्सले एक देशमा जोडिएका सबै मान्यताहरूको अध्ययन गर्नमा केन्द्रित गर्दछ विश्वका अन्य देशहरूसँग।
राजनीतिक वातावरण र समष्टि आर्थिक रूपहरू
विश्लेषण गरिएको छ कि थाहा छ समष्टि आर्थिक रूपहरु, तिनीहरूलाई सँधै हालको अर्थव्यवस्था वा भविष्यको अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक जोखिम निर्धारण गर्न सक्षम गरिनु पर्छ।
जब विदेशबाट लगानी स्वीकृत हुन्छ, यो जोखिम दोब्बर हुन्छ किनभने सरकारले बेच्ने कम्पनीले प्रदर्शनको प्रदर्शन गर्न सक्दछ वा कम्पनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सक्दछ।
के रणनीतिहरु प्रयोग गरिन्छ
यो एक परियोजना भित्र अपेक्षित नगद प्रवाह समायोजन गरेर गर्न सकिन्छ। तपाइँ यसलाई प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ छुट दरहरू जुन देशको कुल बजेटको जोखिममा समायोजित हुन्छन्।
यो गर्ने उचित तरिका हो व्यक्तिगत परियोजनाहरूमा नगद प्रवाह समायोजन कि विभिन्न परियोजनाहरु को लागी एक वैश्विक सेटिंग को उपयोग गर्नुहोस्।
के हुन्छ जब तपाईं विदेशमा लगानी गर्नुहुन्छ
तिनीहरू कहिले स्वीकारिन्छन् विदेशी लगानी, यो जोखिम दोगु भएको छ किनकी बिक्री गर्ने सरकारले प्रदर्शनको छलावरण गर्न सक्दछ वा कम्पनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सक्दछ।
यो एक परियोजना भित्र अपेक्षित नगद प्रवाह समायोजन गरेर गर्न सकिन्छ। तपाइँ यसलाई प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ छुट दरहरू जुन देशको कुल बजेटको जोखिममा समायोजित हुन्छ।
यसको लागि उचित तरिका भनेको विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा नगद प्रवाहहरू समायोजन गरेर जुन विभिन्न परियोजनाहरूको लागि वैश्विक समायोजनको प्रयोग गर्दछ।
सब भन्दा सान्दर्भिक समष्टि आर्थिक चरहरू के हुन्
अब हामी यसमा नजिकबाट हेर्नेछौं सबै भन्दा महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चर:
समष्टि आर्थिक चरमा, विचार गरिएको पहिलो चीज मध्ये एक हो GDP। यो कम्पनीहरू द्वारा उत्पादित देशको सेवा र सामानको मूल्य हो। व्यक्ति जो एक निश्चित अवधिमा क्षेत्र भित्र काम गर्दछ पनि गणना गरिन्छ। यस अवस्थामा अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रहरू प्राथमिक, माध्यमिक र तृतीयक हुन्।
क्रममा एक छ वास्तविक समष्टि आर्थिक चर, त्यस देशमा उत्पादन गरिएको सबै वस्तुहरू ध्यानमा राखिनुपर्दछ, ती बेचे कि भएन पनि। सबै चीजको योग पनि समावेश गर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू। उदाहरणको लागि, यदि हामी स्पेनको भ्यारीएबल खोज्दैछौं भने, विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि ध्यानमा राखिनेछ।
देश द्वारा जीडीपी
जोखिम प्रीमियम वा देशको जोखिम, यो दोस्रो कुरा हो जुन समष्टि आर्थिक रूपहरू गणना गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्दछ। जोखिम प्रीमियम एक प्रीमियम हो जुन लगानीकर्ताहरूले देशको ofणको खरीदहरू गर्दा दिन्छन्।
यो अतिरिक्त लागत सबै लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देश मा buyणपत्र खरीद गर्न आवश्यक छ। राम्रो फिर्ती प्राप्त गर्न देशहरूमा खरीदको जोखिम लिँदा लगानीकर्ताहरूलाई उत्तम प्रतिफल दिइन्छ।
कसरी जोखिम प्रीमियम शेयर बजार असर गर्छ?
यो प्रीमियम कसरी गणना गरिन्छ?
सबै देशहरू साटासाट बन्डहरू आदानप्रदान गर्छन् माध्यमिक बजार र जुन मा ब्याज दर मांग को आधार मा सेट गरीएको छ। प्रीमियम जर्मनी द्वारा जारी गरेको तुलनामा युरोपेली संघ मा एक देश को लागी रहेको १० बर्षे बन्डहरु बीचको भिन्नताबाट गणना गरिन्छ।
मुद्रास्फीति एक हो समष्टि आर्थिक चर अधिक महत्त्वपूर्ण, किनकि यो एक हो जुन सामान्य तरीकाले मूल्यमा भएको वृद्धिलाई प्रत्यक्ष संकेत गर्दछ।
सामान्यतया, एक बर्ष खाता बनाइएको हुन्छ र यसले देशको सामान मात्र समावेश गर्दैन, तर सबै सेवाहरू पनि समावेश गर्दछ।
मुद्रास्फीति भित्र के घटित हुन्छन्
भित्र मुद्रास्फीति त्यहाँ धेरै कारकहरू छन्। मुख्य मध्ये एक हो माग; जब एक देशको माग बढ्छ, तर देश यसको लागि तयार छैन, त्यहाँ मुल्यहरुमा वृद्धि भएको छ।
दोस्रो हो प्रस्ताव। जब यो हुन्छ तब यो हुन्छ किनकि उत्पादकहरूको लागत बढ्न थाल्छ र तिनीहरूले आफ्नो नाफा कायम राख्नको लागि मूल्यहरू बढाउन थाल्छन्।
द्वारा सामाजिक कारणहरू। यो घटनामा देखा पर्दछ कि भविष्यमा मूल्य बढ्ने आशा गरिन्छ, तर स collect्कलनकर्ताहरू समय भन्दा पहिले बढी महँगो शुल्क लिन थाल्छन्।
समष्टि आर्थिक भिन्नतामा ब्याज दरहरू
यो अर्को कारक हो जुन समष्टि आर्थिक भिन्नताहरूको लागि ध्यानमा राखिएको छ। एक देश भित्र, सब भन्दा महत्वपूर्ण ब्याज दरहरू केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ती हुन्। यो पैसा सरकारले बैंकलाई isण लिएको छ र यी बैंकहरूले अन्य बैंक वा व्यक्तिलाई दिन्छन्।
जब त्यो पैसा isण दिइन्छ, यो त्यो बैंकको ब्याज दरमा आधारित हुन्छ र त्यो बाँकी पैसाको साथ फिर्ता फिर्ता हुनुपर्दछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा समष्टि आर्थिक चर विनिमय दर हो। विनिमय दर जहिले पनि दुई मुख्य मुद्राको बिच मापन गरिन्छ र यो पनि युरोपेली केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्णय गरीन्छ। विनिमय दर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु मध्ये एक हो जब यो थाहा हुन्छ कि कुनै देशको मुद्रा अवमूल्यन गरिएको छ वा मूल्या re्कन गरिएको छ।
भुक्तानीहरूको शेष रकम
भुक्तानीको शेष रकम यो त्यस्तो चीज हो जुन समष्टि आर्थिक चरहरू जान्ने क्रममा सधैं ध्यानमा राख्नुपर्दछ। यहाँ के गणना गरिएको छ एक देश को एक निश्चित समय मा छ जो आर्थिक प्रवाह हो, जो सामान्यतया एक बर्ष हो।
भुक्तानीको ब्यालेन्स भित्र त्यहाँ आर्थिक प्रकार गणना गर्न धेरै प्रकारका छन्:
व्यापार सन्तुलन व्यापार ब्यालेन्स एक हो कि सामान को प्रकार का निर्यात को लागी, र साथै आय को प्रकारहरु।
वस्तु र सेवाहरूको सन्तुलन। यहाँ व्यापार ब्यालेन्स र सेवा सन्तुलन जोडिएको छ। यो जहाँ यातायात सेवाहरू, फ्रेट, बीमा र पर्यटन सेवाहरु, सबै प्रकारको आय र प्राविधिक सहयोग आउँदछ।
हालको खाताको शेष रकम यहाँ एक देश को सामान र सेवाहरू थप गरियो, स्थानान्तरणद्वारा गरिएको कार्यहरू बाहेक। यस ब्यालेन्समा देश आएका आप्रवासीहरूको स्वदेश फिर्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुन धेरै देशहरूलाई दिइन्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा चन्दा पनि समावेश गर्दछ।
मूल मापन। यहाँ हामीसँग चालू खाताको अधिक प्लस दीर्घकालीन क्यापिटलको योगफल छ।
देशको समष्टि आर्थिक रूपको रूपमा बेरोजगारी
कुनै देशमा बेरोजगारी भनेको एक बेरोजगारको संख्या हो जुन दिइएको देशमा हुन्छ। बेरोजगार व्यक्तिको परिभाषा भनेको एक व्यक्ति हो जुन काम गर्न चाहन्छ तर जागिर पाउन सक्दैन र देशमा सबै व्यक्ति जो त्यस समयमा काम गरिरहेका छैनन्।
जान्न एक देशको बेरोजगारी दर, बेरोजगार मानिसहरू प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या को राशि मा हुनु पर्छ।
एक व्यक्तिलाई कार्यबलमा प्रवेश गर्न भनिएमा, तिनीहरूको उमेर १ 16 बर्ष भन्दा माथिको हुनुपर्दछ। स्पेनमा, त्यहाँ दुई माध्यमहरू छन् जुन द्वारा बेरोजगारी दर मापन गर्न सकिन्छ र तिनीहरू राज्य रोजगार सेवा वा श्रम शक्ति सर्वेक्षण हुन्।
समष्टि आर्थिक भिन्नताहरूमा आपूर्ति र माग सूचकहरू
यस अवस्थामा, आपूर्ति सूचकहरू ती हुन् जसले हामीलाई बारेमा बताउँछन् एक देश को आर्थिक प्रस्ताव। यी सूचकहरू मध्ये उद्योग आपूर्ति सूचक, निर्माण सूचक र सेवा सूचकहरू हुन्।
माग सूचकको सन्दर्भमा तिनीहरू उपभोग सूचक, लगानी माग सूचक र अन्तत: विदेशी व्यापारसँग सम्बन्धित छन्।
समग्र माग र आपूर्ति
यो मोडेल आर्थिक वर्तमान परिभाषित गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस् समग्र आपूर्ति र माग प्रकार्यहरू मार्फत एक अवधिको उत्पादन र अवस्थित मूल्यहरूको विश्लेषण गर्दछ। यो उत्पादन र मूल्यमा फरक उतार चढावहरूको अध्ययनका लागि आधारभूत साधन हो जुन गणितीय मोडललाई ग्राफिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। यस उपकरणका लागि धन्यबाद, यसले विभिन्न आर्थिक नीतिहरूको नतिजा बुझ्न र यसको परिणाम स्वरूप समष्टि आर्थिक चरमा पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
यस विश्लेषणलाई कार्यान्वयन गर्ने कम्पोनेन्टहरू आपूर्ति र समग्र मागको हुन्।
समग्र माग: यो वस्तु र सेवाहरूको लागि बजारको प्रतिनिधित्व हो। यो निजी उपभोग, निजी लगानी, सार्वजनिक खर्च, र शुद्ध निर्यात (खुला शून्य आयात) को खुला अर्थव्यवस्था को मामला मा बनेको छ।
प्रस्ताव थपियो: यो सामान र सेवाहरूको कुल रकम हो जुन विभिन्न औसत मूल्यहरूमा प्रस्ताव गरिन्छ। त्यसोभए यो मोडेल मुद्रास्फीति, वृद्धि, बेरोजगारी र संक्षेपमा, मौद्रिक नीतिले खेल्ने भूमिकाको विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
लघु आर्थिक चर: तिनीहरू के हुन्?
ती चरहरू हुन् कि व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारको चिन्ता। तिनीहरू दुबै कम्पनी र उपभोक्ता, लगानीकर्ता, कामदार र बजारसँग तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध हुन सक्छन्। विश्लेषण गर्न खेलमा आउने तत्वहरू सामान्य रूपमा सामान, मूल्य, बजार र बिभिन्न आर्थिक एजेन्टहरू हुन्।
कुन व्यक्तिगत एजेन्ट अध्ययन गरीरहेको छ, केहि अध्ययन वा अरूले लागू गर्दछ। उदाहरणका लागि उपभोक्ताहरूमा उपभोक्ताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखिन्छ। यहाँबाट तपाईका प्राथमिकताहरू, बजेटहरू, उत्पादहरूको उपयोगिता र सामानको प्रकारहरू, तपाईंलाई कसरी उपभोग हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। त्यस्तै कम्पनीहरूको लागि पनि त्यहाँ उत्पादनको सिद्धान्त उत्पादन, नाफा अधिकतमकरण र लागत घटताका रूपमा रहेको छ। बजारहरूको लागि, सही र अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको संरचना र मोडेलहरूको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » संकट » वृहत् आर्थिक चर
कार्मेन जुलियाना भेर्डेसो चेंगो भन्यो
म तपाईको क्रिटेरियालाई आर्थिकको बिभिन्न फिल्डहरू जस्तै मन पराउँछु। म तपाईंको प्रकाशनहरूको एक फलोअर हुँ, म व्यवसाय प्रशासनको एक विद्यार्थी हुँ र तपाइँको प्रकाशनहरू मेरो क्यारियरमा धेरै सहयोगी छन्।
बधाई सुसान युबानो ..
मेरो नाम जुलियाना हो ..
म ECUADOR बाट छु ..
कार्मेन जुलियाना भेर्डेसो चेंगोलाई जवाफ दिनुहोस्
यी प्रकाशनहरूले सबै मानिसहरूलाई पढ्नुपर्दछ र यसले विश्वलाई विभिन्न पक्षमा परिवर्तन गर्दछ, विभिन्न देशहरूको अर्थव्यवस्था कसरी चल्दछ भन्ने कुराको कल्पना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र यसैले विकल्पहरू लिन्छन्। क्विटो - इक्वेडरबाट अभिवादन।
राम्रो जानकारी; यद्यपि यो अलि गलत रूपमा लेखिएको छ र केहि भागहरू विसंगत छन्।
HORNE लाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस आर। ग्रेडो सलेन्डिया भन्यो
आर्थिक चरको उपयोग धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन देशसँग भरपर्दो, वास्तविक स्रोतहरू छन्। मौलिक आर्थिक चरको उद्देश्य र समयमै उद्देश्य, उनीहरूको वास्तविक र समसामयिक प्रवृत्ति जान्न विस्तृत राष्ट्रिय आर्थिक योजना र पूर्वानुमान तयार गर्न, ताकि आर्थिक इकाइहरूले भविष्यको वास्तविकताको नजीकको रूपमा निर्णय लिन सक्दछ, यी चरहरूको नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्न सक्दछ, र सबै भन्दा माथि इकाईको इकाईको अर्थव्यवस्था मा आफ्नो प्रवृत्ति, परिणाम र अनुमानन जान्न मापन संयन्त्र स्थापना गर्न।
कार्लोस आर। ग्रेडो सलायानियालाई जवाफ दिनुहोस्